Fizahan-tany : maniry ny eny ifotony ny mba hitrandraka fampandrosoana avy amin’izany | Région Boeny
Boeny Aranta, tanàna kely iray amoron-dranomasina andrefan’i Mahajanga renivohitra no nosafidin’ny Sampandraharaham-paritry ny Fizahan-tany eto Boeny hanamarihan’ny faritra ny andro maneran-tany ho an’ny Fizahan-tany ny 22 sy 23 oktobra lasa teo.
Sakalavan’i Boeny no mponina ao Boeny Aranta izay miisa 450 eo, ary 90% amin’izy ireo dia silamo. Manarato, manamboatra lakana ary mamokatra sira no fotom-pivelomany.
Ao anatin’ny fokontanin’i Boeny Aranta, mandeha lakana miampita ranomasina eo amin’ny 20 minitra miala ny tanàna no misy an’Antsoheribory (sohery: nosy), nosy kely miendrika manga, manana halava 2km eo ary sakany 70m, tsy misy monina hatreto fa mpanarato mandalo no mitoby eo amoron-dranomasina.
Voatahiry ao ireo vakoka arkelojika navelan’ireo Arabo mpihavy taty amin’ny faritra andrefana ary nanorim-ponenana tao ny taon-jato faha XVI.
Ankoatra ireo vakoka navelan’ireo printsy arabo sy ampanjaka sakalava ao, toy ny lapa, ny moske, ny toby miaramila ary ny fasana, dia manan-karena tora-pasika malalaka, ary zava-maniry sy biby Antsoheribory. Misongadina ny Baobab maro izay nangalan’ny Vondron’olona ifotony mitantana ny harena voajanharin’i Boeny Aranta ny anarany hoe VOI Baobab.
Ny hamadika io nosy io ho toerana fizahan-tany mba hitondra fampandrosoana ho azy ireo sy tanànany no hetahetan’ny VOI Baobab sy ny mponin’i Boeny Aranta. Antony nisafidianan’ny Sampandraharaham-paritra sy ny Ofisim-paritry ny Fizahan-tany eto Boeny azy handray ny fankalazam-paritra ny andro maneran-tany ho an’ny Fizahan-tany 2014.
Fitanterana sy fandraisam-bahiny: olana goavana
Efa maro ireo mpizahan-tany malagasy sy vahiny nitsidika tao Boeny Aranta sy Antsoheribory. Olana goavana nefa ny fitanterana. Misy ny an-tanety atao amin’ny fiara tsy mataho-dàlana miainga eo Katsepy rehefa avy niampita baka niala an’i Mahajanga. Amin’ny main-tany ihany no mety io. Misy mandavan-taona kosa ny an-dranomasina, izay atao amin’ny lakana-taxi, 5000 ariary isan’olona, mampitohy an’i Mahajanga sy Boeny Aranta.
Tsy misy foto-drafitr’asa fandraisam-bahiny na dia ny faran’izay tsotra aza, na ao an-tanàna na eny amin’ny nosy Atsoheribory. Tsy misy ny herin’aratra manazava ny tanàna, ary ny rano fisotro dia tsy azo antoka ho ara-pahasalamana.
Fepetra manokana: fiovan’ny toe-tsaina
Ankotra izay dia mbola ilaina ny mametraka fifehezana sy fepetra ho an’ireo mponina any an-toerana mba tena ho iray feo izy ireo ny amin’ny hametrahana an’Antsoheribory ho toeram-pizahan-tany manaraka ny fenitra ka hitondra voka-tsoa ho azy ireo. Ny dikan’izay hoy ny avy ao amin’ny fandaharan’asa alemaina sy malagasy momba ny tontolo iainana eto Mahajanaga, izay manohana ny VOI Baobab, dia tsy tokony hisy mponina hahazo hipetraka na hivezivezy ao Anstoheribory mba ho voatahiry tsy misy tomika ireo vakoka sy harena voajanahary mampalaza ity nosy ity.
Mbola ady sarotra ny hanova izay toe-tsain’ny mponina izay, ka mila fanohanana tanteraka ireo sampandraharaha rehetra misahana ny fizahan-tany rehetra eto amin’ny Faritra mba hahatanteraka ny filamatra napetraky ny ministera tompon’andarikitra hoe “fizahan-tany: ho an’ny fampandrosoana iombonana eny ifotony”.